BurmeseBible: အန်တီရှန်းလုန်၏ လက်ဆောင်တစ်ခု
၂၀၀၈ အချိန်၊ ကျွန်တော့်ဇနီးသည်ကို အန်တီရှန်းလုန်က သူကိုယ်တိုင်လက်နှင့်ထိုးထားသော လက်ဝါးကပ်တိုင်လေးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကား၊ သြစတြေလျား၊ မလေးရှား တို့တွင် လူတိုင်းကားပိုင်ဆိုင်ကြသောကြောင့် ကားမှန်တွင် ချိတ်ဆွဲထားခြင်းအားဖြင့် မိမိသည်ယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်း သိစေပါသည်။ (ထိုနိုင်ငံများရှိ မြန်မာများမှာ ကားတစ်စီး ဒေါ်လာငါးရာမျှဖြင့်ဝယ်နိုင်ပေသည်။ ကားဈေးကြီးသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မကြာမီ လူတိုင်းကားဝယ်နိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါသည်။) ကျွုန်ုပ်၏ ဇနီးသည်က သူ၏ကားတွင် ချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြု၊အောက်မေ့ကာ မိသားစု အတွက်၊ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ဖြစ်စေပါသည်။
လူ့သဘောမှာ မြင်ရသည့်အရာကို ပိုစွဲလမ်းပါသည်။ နှလုံးသားတွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိရန်သာ အဓိကဖြစ်သော်လည်း ဘုရားကိုပိုပြီးသတိရနိုင်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံကို အထိမ်းအမှတ်လုပ်ကြသည်။ လယ်ဆွဲထားသည်။ သို့မှ ပိုပြီးနေသာထိုင်သာရှိပါသည်။
အန်တီရှန်းလုန်သည် အသက် ၈၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ သူ့ခင်ပွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာထူးကြီးထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ သူဖခင်သည်လည်း အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက ရိုးသား၊ဖြောင့်မတ်သော ကချင်အမျိုးသားကြီးဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းဆိုပါက ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရသောသူသည် သားသမီး၊ မြေး များသာမက မြစ်၊တီ၊တွတ်များအထိ မြင်ရသည် ဆိုပါသည်။ အန်တီရှန်းလုန်သည် သားသမီး၊မြေး၊မြစ်များစွာနှင့် ကျမ်းမာစွာနေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
Posted by Witmone at 5:22 AM
Burmese Bible (မုရန်)
အဖွဲ့အစည်း၊အသင်းတော်များ နှင့် ၀က်ဆိုဒ်/ ဖေ့ဘုတ်မိတ်ဆွေများ
နေ့စဉ်ခွန်အား ( FB )
ညစဉ်ခွန်အား ( FB )
မုရန်မဂ္ဂဇင်း ( FB )
HCF မြန်မာ(စင်ကာပူ) ( FB )
သခင့်စကားစာစောင် ( FB )
ODB YMIblogging - for youngs
ခေတ်ပေါ်နှင့်ရိုးရာ ဓမ္မသီချင်းများ၊ ကျမ်းစာနှင့် တရားဟောချက်များ
ဆင်မြူရယ်စိုးလွင်၊ ကြော်ငြာမှတ်စုအထွေအထွာ ( FB )
http://thangno.com/ ( FB )
မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်း .. ရေနက်ရာ.Blog
ဗွီဒီယို၊ အော်ဒီယို ဓမ္မဒေသနာများ Sermons
KL (Malaysia) sermon - Facebook
အီးဘုတ် eBooks BurmeseBible Murann
BurmeseBible.com - Links
မုရန် Murann Ezine
ဆရာလတ်ယေရှဲ (San Francisco)
ဆရာအက်ရှဝါစော @ Ehsehwah Saw (Grace Myanmar Fellowship, Singapore)
ဆရာဇော်သူလင်း (Yangon, ခ၀ဲခြံ)
ဆရာမျိုးသူ (JBCS, Singapore)
ဆရာချိုမနားလိန်း (COS Singapore)
ဆရာမဆူဆန်ချို (COS Singapore)
ဆရာရဲဝင့်လတ် (JBCS, Singapore)
ဆရာမပါပူး @ ဇင်မေသွင် (JBCS, Singapore)
ဆရာအောင်နိုင် @ Andrew (HCF Singapore / Grace Baptist Church, Singapore)
ဆရာဦးဇော်မင်း (MCA Thailand)
ဆရာစောတူးတူးဂျိမ်း (တောင်ငူ၊ သံတောင်)
ဆရာစောစံအောင် Timothy (သတင်းကောင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်)
ယုံကြည်မှု လင့်များ (Video/Audio)
ရန်ကုန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ် ခရစ်စမတ်ကယ်ရိုသီချင်း
"Everything starts from prayer. Without asking God for love, we cannot possess love and still less are we able to give it to others. Just as people today are speaking so much about the poor but they do not know the poor, we too cannot talk so much about prayer and yet not know how to pray." Mother Teresa
့မြန်မာကျန်းမာရေးမိတ်သဟာရ(စင်ကာပူ) HCF Singapore ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းများ (ဆရာအောင်နိုင်)
မြန်မာကျမ်းစာ နှင့် အသင်းတော်များ
င်္င်္Full Gospel Assembly မြန်မာ (Sg)
အကောင်းဆုံး ၁၀၀ Arts & Faith
American English Speaking for Burmese
Scribd - BurmeseBible Documents
Scribd - Gm_Cf ရေနက်ရာ.Blog
Blablumoo (Deceased in 2013)